သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒ - ASFO စတိုး
Farmácia Sousa Torres သည်ဖောက်သည်တစ် ဦး ချင်းစီ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏လုံခြုံမှုနှင့်လုံခြုံမှုရှိစေရန်ကတိက ၀ တ်ပြုထားသည်။ ၎င်းမှာဆေးဆိုင်မှအမိန့်များထုတ်ယူခြင်းနှင့်သုံးစွဲသူများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းအတွက်သာအသုံးပြုသည်။
သုံးစွဲသူ၏လုံခြုံမှုနှင့်သီးသန့်တည်ရှိမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့၏နံပါတ်နှစ် ဦး စားပေးလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရာဝတ္ထုများအားလုံးကိုလုံခြုံစွာထိန်းသိမ်းရန်ရုန်းကန်နေရပြီးအမြဲတမ်းအစွမ်းကုန်ဆုံးဖြတ်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
1. Sousa Torres Pharmacy သည်အောက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်များအားအကောင့်အသစ်တစ်ခု၏မှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းဖောက်သည်များအားတောင်းခံသည်။
2. ဤအချက်များအားလုံးသည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ၀ ယ်ယူမှုလုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်အခြားအင်္ဂါရပ်များကိုရယူရန်လိုအပ်သည်။ ထိုနည်းတူစွာသူတို့သည်မှတ်ပုံတင်ထားသောလူကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ထုတ်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ အမှာစာပေးပို့ခြင်းနှင့်ငွေပေးချေခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအရှိန်မြှင့်တင်ရာတွင်လည်းကောင်းအထောက်အကူပြုသည်။
3. ဤဝက်ဘ်ဆိုက်မှတိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်သွယ်ဝိုက်ကောက်ယူထားသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များအားလုံးကို Sousa Torres Pharmacy မှသီးသန့်အသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတတိယပါတီများအားထုတ်ဖော်ခြင်းမပြုပါ။
4. Sousa Torres ဆေးဆိုင်သည်မှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းကုန်ပစ္စည်းအသစ်များနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းလွှာနှင့် / သို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်အသစ်များနှင့်သက်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက်ကိုအသုံးပြုသူမှရွေးချယ်သောအခါ မှလွဲ၍ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်မည်သည့်ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်ကိုမဆိုအသုံးပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
5. သုံးစွဲသူသည် Sousa Torres Phamacy ၏ဖိုင်များမှ“ ကျွန်ုပ်၏သတင်းအချက်အလက်” interface ကိုဝင်ရောက်ခြင်းအားဖြင့်ဖော်ပြခဲ့သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကြည့်ရှုခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားခြင်းတို့ကိုအမြဲပြုလုပ်နိုင်သည်။
www.asfo.store ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုခြင်းတွင်ဤသီးသန့်လုံခြုံရေးသဘောတူညီချက်ကိုလက်ခံခြင်းပါဝင်သည်။ ဤ ၀ ဘ်ဆိုဒ်၏အဖွဲ့သည်ယခင်သဘောတူညီချက်မရဘဲဤသဘောတူညီချက်ကိုပြောင်းလဲပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အမြဲတမ်းမွမ်းမံခြင်းကိုထိန်းသိမ်းရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ privacy မူဝါဒကိုပုံမှန်ရည်ညွှန်းရန်အကြံပြုပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏သီးသန့်တည်ရှိမှုပေါ်လစီနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ဆုံးမေးမြန်းချက်များအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။